BeardDollars စျေး - အွန်လိုင်း BRDD ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို BeardDollars (BRDD)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ BeardDollars (BRDD) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ BeardDollars ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
BRDD – BeardDollars
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ BeardDollars တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
BeardDollars များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
BeardDollarsBRDD သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00141BeardDollarsBRDD သို့ ယူရိုEUR€0.00119BeardDollarsBRDD သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.00108BeardDollarsBRDD သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.00129BeardDollarsBRDD သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.0128BeardDollarsBRDD သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.0089BeardDollarsBRDD သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0312BeardDollarsBRDD သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00525BeardDollarsBRDD သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00188BeardDollarsBRDD သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00196BeardDollarsBRDD သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0319BeardDollarsBRDD သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.0109BeardDollarsBRDD သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00746BeardDollarsBRDD သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.106BeardDollarsBRDD သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.236BeardDollarsBRDD သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00193BeardDollarsBRDD သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00213BeardDollarsBRDD သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0437BeardDollarsBRDD သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00982BeardDollarsBRDD သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.149BeardDollarsBRDD သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩1.68BeardDollarsBRDD သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.543BeardDollarsBRDD သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.103BeardDollarsBRDD သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0391
BeardDollarsBRDD သို့ BitcoinBTC0.0000001 BeardDollarsBRDD သို့ EthereumETH0.000004 BeardDollarsBRDD သို့ LitecoinLTC0.00002 BeardDollarsBRDD သို့ DigitalCashDASH0.00002 BeardDollarsBRDD သို့ MoneroXMR0.00002 BeardDollarsBRDD သို့ NxtNXT0.116 BeardDollarsBRDD သို့ Ethereum ClassicETC0.000197 BeardDollarsBRDD သို့ DogecoinDOGE0.4 BeardDollarsBRDD သို့ ZCashZEC0.00002 BeardDollarsBRDD သို့ BitsharesBTS0.0546 BeardDollarsBRDD သို့ DigiByteDGB0.0539 BeardDollarsBRDD သို့ RippleXRP0.00473 BeardDollarsBRDD သို့ BitcoinDarkBTCD0.00005 BeardDollarsBRDD သို့ PeerCoinPPC0.00489 BeardDollarsBRDD သို့ CraigsCoinCRAIG0.658 BeardDollarsBRDD သို့ BitstakeXBS0.0616 BeardDollarsBRDD သို့ PayCoinXPY0.0252 BeardDollarsBRDD သို့ ProsperCoinPRC0.181 BeardDollarsBRDD သို့ YbCoinYBC0.0000008 BeardDollarsBRDD သို့ DarkKushDANK0.463 BeardDollarsBRDD သို့ GiveCoinGIVE3.12 BeardDollarsBRDD သို့ KoboCoinKOBO0.318 BeardDollarsBRDD သို့ DarkTokenDT0.0013 BeardDollarsBRDD သို့ CETUS CoinCETI4.17
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Wed, 05 Aug 2020 06:55:02 +0000.